“मिस्टर झोले” ले दियो कबर गीत विजेताहरुलाई यस्तो पुरस्कार | Screennepal
“मिस्टर झोले” ले दियो कबर गीत विजेताहरुलाई यस्तो पुरस्कार
२०७४, २६ पुष बुधबारscreenadminfeature, Movie, Nepali Movie0
अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा निर्माण पक्षले चलचित्रको प्रचार प्रसारको लागि धेरै उपाय अपनाउने गरेको पाईएको छ । ति उपायहरु धेरै हद सम्म सफल भएको पनि देखिन्छ । यस्तै पुस २८ गते देखि प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र “मिस्टर झोले” ले पनि प्रोमोसनको लागि त्यस्तै उपाय अपनाएको थियो । निर्माण पक्षले चलचित्रको “ओखती” शिर्ष गीत धेरै अगाडी सार्वजनिक गरेको थियो । कालीप्रसाद बास्कोटाको शब्द संगीत र स्वरमा तयार भएको उक्त गीतको भिडियो पनि आकर्षक नै तयार भएको थियो । यहि कुरालाई मध्य नजर गर्दै निर्माण पक्षले केहि समय अगाडी उक्त गीतलाई थाती राखेर कबर भिडियो प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो ।
उक्त प्रतियोगिताको हिजो नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । निर्माण पक्षले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उक्त प्रतियोगिताको नजिता सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा क्रमशः प्रतियोगितामा पहिलो , दोस्रो र तेसो हुने प्रतियोगीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा “क्रिस्टल क्लाउज क्रू” ग्रुपले पहिलो स्थान हासिल गर्यो । प्रतियोगिताको विजेता भन्दै उक्त ग्रुपले पुरस्कार स्वरूप १ लाख ५५ हजार प्राप्त गर्यो ।
यस्तै प्रतियोगितामा दोस्रो हुने “किशन एण्ड डान्स क्रू” ग्रुपले १ लाख २५ हजार र तेस्रो हुने “द डाइनामिक क्रू” ले १ लाख ५ हजार प्राप्त गर्यो । चलचित्रका निर्देशक रामबाबु गुरुङले “ओखती” बोलको कभर भिडियो प्रतियोगिताको लागि २५ भिडियो प्राप्त भएको र त्यस मध्येबाट उत्कृष्ट ३ भिडियोलाई विजेता छानिएको बताए । कार्यक्रममा नायक दयाहाङ राई र नायिका दीया पुन लगायत उपस्थित थिए ।
२०७० सालमा निर्माण भएको निर्देशक दीपेन्द्र के. खनाल निर्देशित तथा टेकेन खड्काको निर्माणमा बनेको चलचित्र “झोले” टाईटल ब्रान्डलाई प्रयोग गरि टेकेन खड्का प्रोडक्सन र सिनेमा आर्टले संयुक्त रुपमा “मिस्टर झोले” निर्माण गरेको हो । “कबड्डी”, “कबड्डी कबड्डी”, “पुरानो डुंगा” चलचित्रका निर्देशक रामबाबु गुरुङ निर्देशित यस चलचित्रमा दयाहाङ राई , वर्षा राउत , दीया पुन , प्रविण खतिवडा , वृद्धि तामाङ , पुष्कर गुरुङ , अरुणा कार्की , कमलमणी नेपाल , लक्ष्मी वर्देवा , सरोज अर्याल लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
यस्तै चलचित्रमा शैलेन्द्र डी कार्कीको छायांकन , काली प्रसाद बास्कोटा र सुजेन कार्कीको संगीत , विक्रम स्वारको नृत्य निर्देशन र निमेष श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ । चलचित्रको कथा लेखन तथा निर्देशन रामबाबु गुरुङले गरेका हुन् । यस्तै चलचित्रको निर्माण भने टेकेन खड्काले गरेका हुन् । यस्तै रौनक बिक्रम कडेल चलचित्रको कार्यकारी निर्माता हुन् भने ओम चन्द रौनियार , अर्जुन कार्की र मनिराम पौडेल चलचित्रका सह-निर्माता हुन् ।
हेर्नुस पहिलो भिडियो :
हेर्नुस दोस्रो भिडियो :
हेर्नुस तेस्रो भिडियो :
Previous Postआना र रशीले जिते टुरिजम उपाधि Next Postदोषी को ? : ‘शिरफुल शिरैमा...’ (भिडियो)